Sorry for bad movie making and subtitling. Thanks for watching and I'll try my best next time. ;)
Songs by Khun Than Tun. Disclaimer: I do not own his video or music. Everything belongs to its rightful owners. No copyright infringement intended. It is the copyrighted property of its owner(s). I did MP4, & uploaded to youtube.com..
Mike Than Tun Win CEO of BOD Tech Flymya.com shares about Tech scene and investment landscape in Myanmar on CNBC.
သံစဉ်/စာသား/ဖွဲ့ဆို - ခွန်သန်းထွန်း တေးစု - မောင့်အချစ်ဆုံး မုန်းသူ (၁၉၇၉) တေးဂီတ - EASTERN SUN မူပိုင် - ဒို့ရှမ်းလေး ဖြန့်ချီရေး - Freedom တေးသံသွင်း ၊ ဗထူးလမ်း၊ အောင်ပန်းမြို့ မျက်နှာဖုံးပန်းချီ - မောင်မောင်လှမြင့် ဤ သီချင်းကို စိုင်းဆိုင်မော၊ဝ်၊ လည်း ပြန်ဆိုဖူးသည်။ Credit and Warning Messages Audio and Cassette Tape Cover: Credit with Big Thanks to Ko Kyaw Myin and Ko Thein Tun. Cover Art by Artist Maung Maung Hla Myint. Disclaimer: I do not own the rights to this song and any material of the contents of this music video. Copyright @ Song Writer / Singer Khun Than Tun (His Next of Kin) and Other Rightful Owner(s). No Copyright Infringement Intended. This is "Personal & Non-Commercial Use ONLY". Thank You For Listening! NCA ---- Lyrics: ချယ်ရီတွေ.. ငို.. နေတယ်.. နန်းရယ်.. ဆောင်း.. နှင်း.. ရဲ့.. နှင်းတွေ.. လွမ်း.. ခိုက်မို့.. နှင်းကွဲလို့.. နေခြည်.. ဖြာတော့မှ.. အငို.. တိတ်ရှာတယ်.. တောင်ပြာတွေ.. ငို.. ပြန်ပြီ.. အချစ်ရယ်.. မိုးမင်းရဲ့.. အငြိုးတွေကြောင့်.. ဖြစ်မယ်.. မိုးနှောင်းလို့.. ဟေမန်.. လာချော့မှ.. အငို.. တိတ်ရှာတယ်.. စိုင်း.. ရင်မှာ.. ငို.. နေတယ်.. အချစ် / နန်း ရယ်.. မင်းလေးရဲ့.. အမုန်းတွေ.. နှိပ်စက်လို့.. မင်း.. အပြုံးနဲ့.. ပြန်လာကာ.. ချော့မှ.. အငို.. တိတ်နိုင်မယ်.. အငို တိတ်နိုင်မယ်.. မေ.. ချော့ရင်လေ.. စိုင်း.. တိတ်နိုင်မယ်.. မေ.. ချော့ပါကွယ်.. အငိုတိတ်အောင်လေ..
Min Than Tun Oo
ခွန်သန်းထွန်း တေးရေး တေးဆို
၁၃၇၅ -ခုနှစ် ကဆုန်လဆန်း (၃)ရက် 12-05-2013 (Sunday) တောင်သာမြို့
Book Review - Dr Than Tun (Introduction to Burmese History)
Than Tun (Burmese: သနျးထှနျး, pronounced: [θáɴ tʰʊ́ɴ];6April 1923 – 30 November 2005) was an influential Burmese historian as well as an outspoken critic of the military junta of Burma. For his lifelong contributions to the development of worldwide study of Burmese history and culture, Professor Than Tun was awarded the Fukuoka Asian Culture Prize in 2000.
This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia - https://wn.com/Than_Tun
Than Tun Lay-Kyun Taw Ma Ma Pa Thein Thu
Khun Than Tun တဒင်္ဂထဲက တစ်ခဏ ဘ၀
"Ta Hlay Tae See"; Burmese Songs by Khun Than Tun (1981)
Than Tun Lay-Nyi Lay Toe Ywar
Than Tun Lay-'Ma May Thaw Ah Nyar'
Mike Than Tun Win CEO BOD Tech & Flymya.com CNBC Interview
ချယ်ရီရယ်၊ တောင်ပြာရယ်၊ နန်းရယ် ရေး/ဆို ခွန်သန်းထွန်း
paoh song khun than tun ယူးထွားဗဲင်းနီ[NGAR OFFICIAL MV]
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-7
Than Tun Lay-'Bone Gyi Than'
Painting Credit to ; Artist ; U Lun Gywe Title ; Storm over the Rice Field Year drawn ; 2011 Medium ; Oil on Canvas
ta hlae tae see - Khun Than Tun
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-1
Wedding Celebration ၁၃၇၅ -ခုနှစ် ကဆုန်လဆန်း (၃)ရက် 12-05-2013 (Sunday) တောင်သာမြို့
Lai than tun
Lai hla thar 2017
Than Tun Lay-"Kyun Taw Mway Htar Ni"
Đứa bạn thân 😄| Tun Phạm Vlog
ĐÂY LÀ KÊNH YOUTUBE CHÍNH THỨC CỦA TUN!!! MỌI NGƯỜI SHARE VÀ SUBSCRIBE CHO TUN NHÉ!!! SUBSCRIBE CHANNEL: https://goo.gl/o8ANpe == Follow me on my social media == My Facebook: https://www.facebook.com/tunpham97 My Instagram: http://instagram.com/tunpham97 Các video đều thuộc bản quyền của Tun! mọi người vui lòng không reup load dưới mọi hình thức!
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-2
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-3
သံစဉ်/စာသား/ဖွဲ့ဆို - ခွန်သန်းထွန်း တေးစု - မောင့်အချစ်ဆုံး မုန်းသူ (၁၉၇၉) တေးဂီတ - EASTERN SUN မူပိုင် - ဒို့ရှမ်းလေး ဖြန့်ချီရေး - Freedom တေးသံသွင်း ၊ ဗထူးလမ်း၊ အောင်ပန်းမြို့ မျက်နှာဖုံးပန်းချီ - မောင်မောင်လှမြင့် ဤ သီချင်းကို စိုင်းဆိုင်မော၊ဝ်၊ လည်း ပြန်ဆိုဖူးသည်။ Credit and Warning Messages Audio and Cassette Tape Cover: Credit with Big Thanks to Ko Kyaw Myin and Ko Thein Tun. Cover Art by Artist Maung Maung Hla Myint. Disclaimer: I do not own the rights to this song and any material of the contents of this music video. Copyright @ Song Writer / Singer Khun Than Tun (His Next of Kin) and Other Rightful Owner(s). No Copyright Infringement Intended. This is "Personal & Non-Commercial Use ONLY". Thank You For Listening! NCA ---- Lyrics: ချယ်ရီတွေ.. ငို.. နေတယ်.. နန်းရယ်.. ဆောင်း.. နှ...
Songs by Khun Than Tun. Disclaimer: I do not own his video or music. Everything belongs to its rightful owners. No copyright infringement intended. It is t...
သံစဉ်/စာသား/ဖွဲ့ဆို - ခွန်သန်းထွန်း တေးစု - မောင့်အချစ်ဆုံး မုန်းသူ (၁၉၇၉) တေးဂီတ - EASTERN SUN မူပိုင် - ဒို့ရှမ်းလေး ဖြန့်ချီရေး - Freedom တေးသံသွင်း ၊ ဗထူးလ...
ĐÂY LÀ KÊNH YOUTUBE CHÍNH THỨC CỦA TUN!!! MỌI NGƯỜI SHARE VÀ SUBSCRIBE CHO TUN NHÉ!!! SUBSCRIBE CHANNEL: https://goo.gl/o8ANpe == Follow me on my social medi...
မေဆွိ ရင်ထဲကခွန်သန်းထွန်း May Sweet - Yin Htae Ga Khun Than Htun (Full Album)
0:00 ကျောင်းတော်သာလွိုင်လင်မြို့ 5:18 မေရယ်ရှိမှမောင့်ဘဝ 9:45 ကောင်ကလေးနဲ့ကောင်မလေး 13:30 မောင့်အချစ်ဆုံးမုန်းသူ 18:07 အမုန်းပန်းကိုပြုံးလို့ခူးရင်း 21:43 လာလှည့်တော့နွေ 24:33 တဒင်္ဂထဲကတစ်ခဏဘဝ 29:54 နွေဆိုး (တစ်နေ့တစ်လံပေါ့ပုဂံရယ်) 33:34 ချယ်ရီရယ် တောင်ပြာရယ် နန်းရယ် 36:22 လာလမ်းနောက်လှည့် 39:43 အလာနှောင်းတဲ့စိုင်း 45:06 ဖော်ဝေး 49:51 ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် 55:35 ရှိစေတော့မောင့်ကို
"Shwe Thi Chin Myar"; Burmese Songs by Playboy Than Naing 1979
"Shwe Thi Chin Myar"; Burmese Songs by Playboy Than Naing in 1979, Second version, Orginal Recording in Lynn Studio. Disclaimer: I do not own his songs. Everything belongs to its rightful owners. No copyright infringement intended. It is the copyrighted property of its owner(s). Audio from Tape. (Might be cotained foreign song(s) that belongs to other(s).) I did audio cleaning, pitch correction, audio re-mastering, MP3, MP4, & uploaded to youtube.com. MP3 Down Load Link http://www.mediafire.com/?f08gpdy92q0g8
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-4
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-5
UM1AA 12thCME_Professor Zaw Than Htun
Topic_ Reducing Mortality and Morbidity in patients with dengue haemorrhagic fever University of Medicine (1) ALUMNI ASSOCIATION
UNITY ROSE By Ko Tun and Than Htut
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ဘေးဒုက္ခရောက် နေသူတွေကို ကူညီဖို့ ရုပ်ရှင်အဆိုတော်တွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေ ကပြ ညီညွတ်ခြင်း နှင်းဆီဆိုတဲ့ အငြိမ့်လေး ကြည့်ချင်သူတွေ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။...ညီညွတ်ခြင်း နှင်းဆီဆိုတဲ့ အငြိမ့်ခွေ အစအဆုံးဖြစ်ပါတယ်..။ရင်ဘတ်ကြီးထဲက ထွက်လာတဲ့ အနုပညာသည်များကို လေးစားစွာဖြင့် ဦးညွတ်ပါတယ်။ ဗွီဒီယို ကိုသန်းထွန်းအောင်
Ei lu baung twin Maung Maung Ta, Tun Wai, Myint Myint Khin
Maung Maung Ta's Movie
Rev Than Tun 17 09 2017
ဆရာတော်သန်းထွန်း "ပေရဂံမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်" ဗျာဒိတ်ကျမ်း၊ ၂း၁၂-၁၇။
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-6
Rev. Than Tun
Rev Than Tun | 2017 04 09 | Sermon
Find Us On: http://www.mcathailand.com/ FaceBook // MCA Thailand // https://www.facebook.com/MCAThailand/?ref=hl YouTube // MCA Sermons // https://www.youtube.com/channel/UCSPHoHMc8beTOXaP5Cg8NKw iTune / Podcast // MCA Thailand https://itunes.apple.com/us/podcast/mca-thailands-podcast/id567970024?mt=2 Podcast / MCA Thailand http://mcathailand.podomatic.com
ဆရာတော်သတင်းသုံးတဲ့ မြ စေတီ ရဲ ကျောင်းမှာရောက်လာတဲ့ ခွေးးလေ ခွေးးလွင့် တွေအ ကြောင်းးလေးပါ
ဒါက တော့ တောင်ကြီးး သိမ်တောင် ကျောင်းတိုက်မှာ ဟောကြားသွားတဲ့ မော်လမြိုင် မြ စေတီ ဆရာတော်ပါ ကမ္ဘာ့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အငြိမ်းးဆုံးး ဘာသာ တရားးလို့ ထင်ပေါ်ခဲ့ပြီးး ဒါပေမယ့် နွယ်ခါးးရစ်ခွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ ကမ္ဘာမှာ အကြမ့်းဖက် ဘာသာဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်သွားတယ် ဆိုတာလေးး နားထောင် ကြညိ့ပါ နောက်ပြီးး စိတ်ဝင်းစားစရာ ကောင်းတာက တော့ လက်ပံ ပွငိ့ချိန် ခွေးးရူးးချိန်တဲ့ အဲ့ဒီ ခွေးးရူးးတွေဟာ ဘုန်းးကြီးး တွေ တငိ မက မြန်မာပြည် တပြည်လုံးကို လိုက်ကိုက်မှာတဲ့ နောက်ပြီးး ဆရာတော်သတင်းသုံးတဲ့ မြ စေတီ ရဲ ကျောင်းမှာရောက်လာတဲ့ ခွေးးလေ ခွေးးလွင့် တွေအ ကြောင်းးလေးပါ အဲ့ဒီ ခွေးးလေ ခွေးလွင့်တွေဟာ လေးနာရီခွဲ ငါးနာရီ လောက်ဆို ထထ အူတယ်တဲ့ ဆရာတော်က စဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့ သူတို့ တွေ မေတ္တာများ ပို့ကြတာလားး သီချင်းးများ ဆို ကြတာလားပေါ့ အဲ့ဒီလို ထထ အူနေတဲ့ ခွေးးတွေကို ဘယ်လို မောင်းးထုက် ရမယ် ဆိုတာ ဆရာတော်က ဟောကြားးထားပါတယ် နားထောင် ကြည့်ပ...
Rev.Than Tun. (5 February, 2017)
Rev.Than Tun. (5 March, 2017)
မိုးဦးပန်း မေတ္တာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဆေးခန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ( ၃၀.၆.၂၀၁၃) မှတ်တမ်း ၃
အထက ၁ ဗဟန်း ကျောင်းသား/သူ ဟောင်းများ၏ မိုးဦးပန်း မေတ္တာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဆေးခန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ( ၃၀.၆.၂၀၁၃) မှတ်တမ်း ၃
Sermon of "Kingdom" by Rev. Nai Tun Than on 26 May 2013
Bangkok Christ Church Sunday Worship Service
Rev. Than Tun (28 August, 2016)
0:00 ကျောင်းတော်သာလွိုင်လင်မြို့ 5:18 မေရယ်ရှိမှမောင့်ဘဝ 9:45 ကောင်ကလေးနဲ့ကောင်မလေး 13:30 မောင့်အချစ်ဆုံးမုန်းသူ 18:07 အမုန်းပန်းကိုပြုံးလို့ခူးရင်း 21:43 လာလှည...
"Shwe Thi Chin Myar"; Burmese Songs by Playboy Than Naing in 1979, Second version, Orginal Recording in Lynn Studio. Disclaimer: I do not own his songs. Ever...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ဘေးဒုက္ခရောက် နေသူတွေကို ကူညီဖို့ ရုပ်ရှင်အဆိုတော်တွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေ ကပြ ညီညွတ်ခြင်း နှင်းဆီဆိုတဲ့ အငြိမ့်လေး ကြည့်ချင်သူတွေ အတွက် တင်ပေးလို...
Find Us On: http://www.mcathailand.com/ FaceBook // MCA Thailand // https://www.facebook.com/MCAThailand/?ref=hl YouTube // MCA Sermons // https://www.youtub...
ဒါက တော့ တောင်ကြီးး သိမ်တောင် ကျောင်းတိုက်မှာ ဟောကြားသွားတဲ့ မော်လမြိုင် မြ စေတီ ဆရာတော်ပါ ကမ္ဘာ့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အငြိမ်းးဆုံးး ဘာသာ တရားးလို့ ထင်ပေါ်ခဲ့ပြီးး ဒါပေ...
ဒါက တော့ တောင်ကြီးး သိမ်တောင် ကျောင်းတိုက်မှာ ဟောကြားသွားတဲ့ မော်လမြိုင် မြ စေတီ ဆရာတော်ပါ ကမ္ဘာ့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အငြိမ်းးဆုံးး ဘာသာ တရားးလို့ ထင်ပေါ်ခဲ့ပြီးး ဒါပေမယ့် နွယ်ခါးးရစ်ခွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ ကမ္ဘာမှာ အကြမ့်းဖက် ဘာသာဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်သွားတယ် ဆိုတာလေးး နားထောင် ကြညိ့ပါ နောက်ပြီးး စိတ်ဝင်းစားစရာ ကောင်းတာက တော့ လက်ပံ ပွငိ့ချိန် ခွေးးရူးးချိန်တဲ့ အဲ့ဒီ ခွေးးရူးးတွေဟာ ဘုန်းးကြီးး တွေ တငိ မက မြန်မာပြည် တပြည်လုံးကို လိုက်ကိုက်မှာတဲ့ နောက်ပြီးး ဆရာတော်သတင်းသုံးတဲ့ မြ စေတီ ရဲ ကျောင်းမှာရောက်လာတဲ့ ခွေးးလေ ခွေးးလွင့် တွေအ ကြောင်းးလေးပါ အဲ့ဒီ ခွေးးလေ ခွေးလွင့်တွေဟာ လေးနာရီခွဲ ငါးနာရီ လောက်ဆို ထထ အူတယ်တဲ့ ဆရာတော်က စဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့ သူတို့ တွေ မေတ္တာများ ပို့ကြတာလားး သီချင်းးများ ဆို ကြတာလားပေါ့ အဲ့ဒီလို ထထ အူနေတဲ့ ခွေးးတွေကို ဘယ်လို မောင်းးထုက် ရမယ် ဆိုတာ ဆရာတော်က ဟောကြားးထားပါတယ် နားထောင် ကြည့်ပါ မြန်မာတွေ အတွက်တော့ အ ရေးးကြီးပါတယ် လိုင်းးမ ကောင်း၍ ကြည့်မ ရလျှင် ဒီအောက်က လင့်ကို ဒေါင်းလော့ ဆွဲ ပြီးး ကြည့်ပါ အဆင် ပြေပါစေ https://www.dropbox.com/s/zgpfcna8y4qzyhj/969%20တရားတော်%20part%203_low_00.mp4?dl=0 — Zaww Zaww ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Sorry for bad movie making and subtitling. Thanks for watching and I'll try my best next t...
Songs by Khun Than Tun. Disclaimer: I do not own his video or music. Everything belongs...
Mike Than Tun Win CEO of BOD Tech Flymya.com shares about Tech scene and investment landsc...
သံစဉ်/စာသား/ဖွဲ့ဆို - ခွန်သန်းထွန်း တေးစု - မောင့်အချစ်ဆုံး မုန်းသူ (၁၉၇၉) တေးဂီတ - EASTER...
Painting Credit to ; Artist ; U Lun Gywe Title ; Storm over the Rice Field Year draw...
Latest News for: than tun
PETALING JAYA. Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad should not have hadaone-on-one meeting with Chief Justice Tun Md Raus Sharif, says senior lawyer Roger Tan ... ....
Terengganu Mentri Besar Dr Ahmad Samsuri Mokhtar said he is waiting forasuitable time to meet and haveadiscussion with Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad about the oil and gas royalty for the state ... Tun Dr Mahathir Mohamad about the oil and gas royalty for the state....
"Prime Minister of Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad driving himself to monitor the latest developments around Kuala Lumpur this morning.". He added ... May God always protect this statesman.". Perdana Menteri Malaysia YAB Tun Dr Mahathir Mohamad @chedetofficial memandu sendiri memantau perkembangan terkini disekitar Kuala Lumpur pagi tadi ... ....
(The Sun Daily) – Former Petrosaudi International executive Xavier Andre Justo today met with Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad in Kuala Lumpur ... Who Is Xavier Andre Justo? ... He drew interest in Malaysia in view of the cooperation between PetroSaudi and 1MDB ... The administration of Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad has vowed to pursue the 1MDB corruption case ... ....
0:00 ကျောင်းတော်သာလွိုင်လင်မြို့ 5:18 မေရယ်ရှိမှမောင့်ဘဝ 9:45 ကောင်ကလေးနဲ့ကောင်မလေး 13:30 ...
"Shwe Thi Chin Myar"; Burmese Songs by Playboy Than Naing in 1979, Second version, Orginal...
Topic_ Reducing Mortality and Morbidity in patients with dengue haemorrhagic fever Univers...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ဘေးဒုက္ခရောက် နေသူတွေကို ကူညီဖို့ ရုပ်ရှင်အဆိုတော်တွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေ က...
Find Us On: http://www.mcathailand.com/ FaceBook // MCA Thailand // https://www.facebook...
"Ta Hlay Tae See"; Burmese Songs by Khun Than Tun ...
မေဆွိ ရင်ထဲကခွန်သန်းထွန်း May Sweet - Yin Htae Ga ...
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-1...
"Shwe Thi Chin Myar"; Burmese Songs by Playboy Tha...
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-2...
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-4...
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-5...
UM1AA 12thCME_Professor Zaw Than Htun...
UNITY ROSE By Ko Tun and Than Htut...
Ei lu baung twin Maung Maung Ta, Tun Wai, Myint My...
Rev Than Tun 17 09 2017...
Thein Than Tun + Win Win Maw 's Wedding Videos-6...
Rev. Than Tun...
Rev Than Tun | 2017 04 09 | Sermon...
ဆရာတော်သတင်းသုံးတဲ့ မြ စေတီ ရဲ ကျောင်းမှာရောက်လာတဲ...
Rev.Than Tun. (5 February, 2017)...
Rev.Than Tun. (5 March, 2017)...
မိုးဦးပန်း မေတ္တာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဆေးခန်...
Sermon of "Kingdom" by Rev. Nai Tun Than on 26 May...
Rev. Than Tun (28 August, 2016)...
When PKR vice president Rafizi Ramli took to Twitter to voice out his dissatisfaction with the nomination of three cabinet portfolios by Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad early last week, he was publicly criticised and hounded even by his own Pakatan allies. “I am absolutely horrified at Rafizi Ramli’s criticism of Prime Minister Tun Dr ......
KUALA LUMPUR. Former prime minister Datuk Seri Najib Tun Razak has denied asking to be put into witness protection as reported by local media ... ....
Khairuddin, foiled the first time, lodges report with FBI over 1MDB
PETALING JAYA. Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan has lodgedareport with the US Federal Bureau of Investigation (FBI) against Datuk Seri Najib Tun Razak with regards to the 1Malaysia Development Bhd (1MDB) scandal ... ....
Video of Dr Mahathir driving Proton Perdana goes viral
SINGAPORE. A video of Malaysian Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad driving what appeared to beaProton Perdana around the city went viral after it was shared on Twitter on Sunday (May 20) ... ....
PETALING JAYA. Malaysians should not persuade Tun Dr Mahathir Mohamad to change his mind about not taking up the Education Minister portfolio, says senior lawyer Datuk Roger Tan ... ....